Gobolka Tambov, waxaa socda hawlo kor loogu qaadayo dhul-beereedka. Sanadka 2020, gobolka ayaa qorsheynaya inuu sameeyo 800 oo hektar oo dhul beereed ah.
Sida laga soo xigtay waaxda beeraha ee gobolka, 3-dii sano ee la soo dhaafay, nidaamyada waraabka oo leh awood guud oo naqshadeyn ah oo ka badan 2,2 kun oo hektar ayaa laga dhisay loona xilsaaray gobolka Tambov iyada oo qayb ka ah barnaamijka waaxda "Horumarinta Isku-dhafka Dhul-ahaanta ee Ruushka". Baradhadu, galley, soybe, iyo xididdo sokor ayaa lagu beero meelaha waraabinta.
Sanadka 2020, soosaarayaasha beeraha ayaa qorsheynaya inay xukumaan 800 hektar oo dhul beereed ah. Mid ka mid ah kaqeybgaleyaasha ugu waa weyn ee barnaamijka dib u dhiska dhulka ee barnaamijka Ruushka waa Zolotaya Niva LLC, Belaya Dacha Farming LLC iyo Tambovagrofood LLC.
Sida laga soo xigtay Tambovmeliovodkhoz laga bilaabo 01.01.2020, guud ahaan gobolka Tambov waxaa loo qorsheeyay in lagu waraabiyo wax ka badan 8 kun hektar oo dhul beereed ah.
Tags: baradho korayawaraabkaGobolka Tambov
Wadamada EAEU waxay joojinayaan waajibaadka canshuuraha ee dhoofinta baradhada, basasha iyo karootada
Agrofirm KriMM wuxuu siiyaa barandho abuur Serbia
Su'aasha HR. Ka hadal khadka telegramka joornaalada